ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာ အမြတ်ရအောင် ဘယ်လိုရောင်းဝယ်မလဲ
မြင့်မားတဲ့ မတည်ငြိမ်မှုပေါ်မှာ သင့်အမြတ်ကို တိုးမြှင့်လိုက်ပါ
ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုအကြောင်း ကြီးမားတဲ့အချက်ကတေ့ ဒီအပေါ်မှာသင်ငွေ အများအပြားရှာနိုင်တာပါပဲ။ ဈေးနှုန်းက အားကောင်းတဲ့ရွေ့လျှားမှုကြီးဖြစ်ရင်၊ သင့်အမြတ်လည်း သိသိသာသာတိုးလာနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း၊ အလကားဆိုတာဘယ်မှာမှ မရှိပါဘူး။ အမြတ်ကြမ်းကြမ်းဟာ ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုလဲ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ထောက်ချောက်တဲ့ကျမဲ့အရေးမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်ကူညီပေးမည့် အရေးကြီးဆုံးအကြံပြုချက်များကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သရုပ်ပြချက်ကို ၂ပိုင်းခွဲထားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်: သင်လုပ်သင့်တာနှင့် မလုပ်သင့်တာ။ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုမြင့်လာသည့်အခါ သင်လုပ်ရမည့်အရာတွေနဲ့ စလိုက်ကြရအောင်။
အမြတ်ယူ (take profit) / ရပ် ရှုံး (stop loss)ကို အကျယ်ချဲ့ခြင်း
ဈေးကွက်အလှုပ်ကြမ်းမှု မျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာများသည်လည်း ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်အရောင်းအဝယ်လုပ်ချင်တယ် ဆိုပါစို့။ ဒီကာလအတွင်းမှာ၊ ဈေးနှုန်းဟာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အတက်အကျဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ take profit/stop loss သတ်မှတ်ထားမည်ဆိုပါက၊ အမြန်ရွေ့လျှားနေသည့်ဈေးတန်းသည် ၎င်းကို
မြန်မြန်ထိသွားနိုင်ခြေမြင့်မားပြီး၊ အကျိုးအမြတ်ကြီးရခြင်းကနေ တားလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါမည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဈေးကွက်ထဲ ကြာကြာတည်မြဲနိုင်ရန် သင့် take profitနှင့် stop loss အော်ဒါများကို ချဲ့ထားသင့်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှု မြင့်မားနေချိန်အတွင်း၊ သင့်အမြတ်တွေကို အဖွင့်အနေအထားမှာ ရုတ်တရက်တက်သွား၊ ကျသွားတာကို မြင်ရလိမ့်မည်။ ထိတ်လန့်မသွားဖို့အရေးကြီးပြီး၊ ပစ်မှတ်များကို ပါးနပ်စွာရွေးချယ်ကာ၊ ဈေးတန်းအဲ့ကိုထ ရောက်တဲ့အထိစောင့်ပါ။
ရှေ့စာပိုဒ်တွင်၊ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုမြင့်မားခြင်းမှ ရှင်ကျန်ရစ်နိုင်ရန် stops(ရပ်မှတ်များ)ကို ကျယ်ကျယ်ခွာထားရမည်။ သို့သော်၊ သင့်အရောင်းအဝယ် ရည်မှန်းချက်တွေက ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
ထရောက်သောရွေ့လျှားမှုမှာ ဈေးတန်းသွားလိုက်ပေမယ့် ရှေ့ဆက်လားရာကို မသေချာဘူးဆိုပါစို့။ ကျသွားပြီး၊ ပြန်တက်နိုင်သလို၊ ကျသွားပြီး၊ ပြန်မတက်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အရ၊ သင်ဟာမစွန့်စားချင်ဘူး ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အရောင်းအဝယ် အခွင့်အရေးကြီးကိုလည်း လက်လွှတ်မခံချင်ပြန်ဘူး။ သင်သည် တိကျတဲ့ဈေးတန်းအပြောင်းအလဲကို အမိဖမ်းချင်တယ်ဆိုပါက၊ ဈေးတန်းနားမှာ stop loss ထားပါ။ သင်သွားမည်ဟုထင်ထားသည့် လားရာအတိုင်းဈေးတန်းမသွားခဲ့ပါက၊ သင်ကိုသိပ်ထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သွားခဲ့ရင်လည်း၊ ကံကောင်းပြီး၊ ရွေ့လျှားမှုကို သင်ဖမ်းမိနိုင်ကာ ဈေးကွက်အလှုပ်ကြမ်းမှုကြောင့် ဝင်ငွေပိုမိုရနိုင်မှာပါ။
stop loss အကျယ်နှင့် အကျဉ်းနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်ကြားက ကွာခြားချက်ကို သင်မြင်ပြီလား? သင့်ဗျူဟာက သင့်လုပ်ရပ်ကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်!
Resistanceနဲ့ support အဆင့်များသည် ရောင်းဝယ်သူများအတွက် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဟာ အဝင်၊ ပြောင်းပြန်နှင့် အထွက်မှတ်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် သူတို့ကိုသုံးပါတယ်။ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်နေချိန်တွင် သူတို့အချိုးသည် ထိုးဖောက်မှု၏ ဦးတည်ရာမှာ အလွန်အမင်းကြီးမားသည့် ဈေးနှုန်းရွေ့လျှားမှုတစ်ခု ဖြစ်စေတတ်သည့်အတွက် ဤအဆင့်များသည် ပိုအရေးကြီးလာပါသည်။
ဈေးကွက်သည် ထိတ်လန့်စရာတစ်ခုပေမယ့် သင်ကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အခြားရောင်းဝယ်သူများသည် ထိတ်လန့်နေတဲ့အခါ သင်သည်အချိုးကို လိုက်နာနိုင်ပါသည်။ ဒါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ အလောင်းအစားပါ: ပရမ်းပတာဈေးကွက်အတွင်း အချိုးသည် မှားယွင်းနိုင်ပြီး၊ ဈေးတန်းပြန်လှည့်သွားတတ်သည်။ သို့သော်၊ အချိုးသည် မမှားပါက၊ အမြတ်ကြီးရပါလိမ့်မည်။ သင်သည် အလှမ်းကျယ်ပြီး၊ အန္တရာယ်များတဲ့အလောင်းအစားကိုပြုလုပ်နေသည့် အချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ သင်သည် ပိုကြီးတဲ့ take profitရှိရန် သင့်ကိုယ်ကို ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါသည်။ ဈေးကွက်က သင်နှစ်သက်ရာအတိုင်းရွေ့သည်နှင့်၊ သင့် stop loss ကို အရှုံးအမြတ်မရှိသည့် အမှတ်သို့ရွှေ့ထားပြီး၊ ဈေးတန်းနောက်ကိုလိုက်ပါစေ။
အမြတ်ရသည့်အရောင်းအဝယ်အတွက် သော့ချက်သည် ကွဲပြားခြားနားစေပါသည်။ ဈေးနှုန်းအကြောင်း ဘယ်တော့မှ မသေချာနိုင်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ခွဲခြားထားဖို့တန်ပါသည်။ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုမှာ တစ်စုံတစ်ရာဆုံးရှုံးပါက၊ နောက်ထပ်တစ်ခုမှာ အမြတ်ရလိမ့်မည်ဟု မြင့်မားသည့်အလားအလာရှိပါသည်။
ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုမြင့်မားချိန်တွင်၊ မသေချာမရေရာမှု တိုးမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ဤစည်းမျဉ်းသည် အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ အတွဲတွေအားလုံးသည် တစ်ချိန်တည်းမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် အတက်အကျကြမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် မဆက်နွယ်နေတဲ့အတွဲများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါ။ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုမြင့်လို့ အရှုံးတွေခံစားရပါက၊ အခြားအတွဲများမှာ အမြတ်နှင့် ပြန်ချောမွေ့အောင်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ခုဆို သင်မလုပ်သင့်သည့် အရာများကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။
နည်းပညာအညွှန်းကိန်းများသည် ရောင်းဝယ်သူများကို အတော်လေးကူညီပေးပါသည်။ သော့ချက်အဆင့်များကို သတ်မှတ်ပြီး၊ ဈေးနှုန်း၏ အနာဂတ်ဦးတည်ရာကို ဆုံးဖြတ်ကာ၊ ဈေးလမ်းကြောင်းအပေါ် အရိပ်အမြွက်ပေးခြင်း၊ စသဖြင့်လုပ်ပေးပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ အရောင်းအဝယ်သည် ချောမွေ့နေစဉ် သူတို့သည်ကောင်းပါသည်။ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုမြင့်မားနေချိန်တွင်၊ သူတို့သည် သင့်ကိုလှည့်စားနိုင်ပါသည်။ ဈေးကွက်သည် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့် ကြီးမားတဲ့ရွေ့လျှားမှု ဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့် လှုပ်ခါသောအခါ၊ ဘယ်အညွှန်းကိန်းကမှ ထိုလှုတ်ခါမှုကို ချက်ချင်းမတုန့်ပြန်နိုင်ပါဘူး။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ အညွှန်းကိန်းများမှ သင့်ဇယားကိုရှင်းလင်းဖို့ ကောင်းပါသည်။
ဈေးကွက်လှုတ်ခတ်မှုတွင် လှုပ်ခတ်မှုကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ကူညီပေးမည့် အညွှန်းကိန်းတစ်ခုက်တော့ Bollinger bands ဖြစ်သည်။ ဤအညွှန်းကိန်း၏ စိတ်ကူးမှာ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အညွှန်းကိန်းများ၏ မျဉ်းသုံးကြောင်း ကျဉ်းမြောင်းလာသည်ကို မြင်သည့်အခါ၊ ဈေးနှုန်း၏ လာမည့်လှုပ်ခတ်မှုအချက်ပြချက် ဖြစ်သည်။
ဤတွင် နောက်ထပ်အရေးကြီးအချက်တစ်ခု ထပ်ပေါင်းထည့်သင့်သည်။ ဒါကတော့ "ကျယ်ပြန့်စွာ ကြည့်ရှု"ပါဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုမှာ ရောင်းဝယ်နေစဉ်အတွင်း သေးငယ်သည့် အချိန်အပိုင်းအခြားများကို ဘယ်တော့မှ ထည့်မစဉ်းစားသင့်ပါ။ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှု မြင့်နေချိန်တွင် ဈေးကွက်သည် အရမ်းလှုပ်ရှားလွန်းနေသည်။ သေးငယ်သည့် အချိန်အပိုင်းအခြားများရှိ ဦးတည်ရာသည် တိုတောင်းသည့်ကာလတွင် အကြိမ်များစွာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သင်သည် ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ပြီး၊ အရှုံးများ၏ အန္တရာယ်သည် သိသိသာသာ တိုးလာသည်။ ပိုကြီးမားသည့် အချိန်အပိုင်းအခြားများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ပုံသည် ပိုရှင်းလင်းလာပြီး၊ အခြေအနေကို ကောင်းကောင်းကြီးပိုနားလည်လာလိမ့်မည်။
ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုမြင့်နေချိန်တွင် ထိတ်လန့်ပြီး၊ အရူးလိုစလုပ်မိဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။ထိတ်လန့်မှုဟာ အခြေအနေကို ပိုပဲဆိုးရွားစေမှာပါ။
အဓိက စည်းမျဉ်းကိုမှတ်ထားပါ: ဈေးတန်းဦးတည်ရာကို ဘယ်တော့မှမလှည့်ပြောင်းနိုင်ပါဘူး။ ဈေးတန်း အလွန်လျှင်မြန်စွာ အတက်/အကျဖြစ်နေတာ သင်မြင်ပါက၊ ထိပ်ဆုံးနေရာတွေနဲ့ အောက်ခြေတွေကိုရွေးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ သူတို့ကို အတိအကျဆုံးဖြတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်လုပ်ရမှာကတော့ stop lossesနဲ့ take profit တွေကို သဘောပေါက်နားလည်စွာ သတ်မှတ်ထားဖို့ပါပဲ။ ရလဒ်အနေနဲ့၊ သင့်အမြတ်ကို တိုးပွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ အရောင်းအဝယ် မအောင်မြင်ရင်တောင်မှ သင့်အရှုံးတွေကို ဖြတ်ချပစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ရသော်၊ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှု မြင့်မားချိန်တွင် ရောင်းဝယ်ရခြင်းသည် စိတ်ဝင်းစားဖွယ်ကောင်းသည့် အရာဖြစ်သည်။ အမြတ်ကြီးကြီးရနိုင်မည့် သော့ချက်ဖြစ်သည်; သို့သော်လည်း အန္တရာယ်ကြီးကိုလည်း သယ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လည်း အဆင့်မြင့် ရောင်းဝယ်သူများသာ ဒါကိုကျော်ဖြတ်ပြီး အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုမြင့်မားချိန်မှာ ရောင်းဝယ်ချင်ပါက၊ သင့်အရည်အသွေးကို အရင်မြှင့်တင်သင့်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦး ဖြစ်လာရန် ကျွန်တော်တို့၏ လမ်းညွှန်စာအုပ် ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ!
21.12.2018 16:03 ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များအတွင်း ရောင်းဝယ်ခြင်း
ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များ နီးကပ်လာပြီဖြစ်သဖြင့်၊ အဓိကမေးခွန်း ရောင်းဝယ်သူတိုင်းထံတွင် ရှိလာပါပြီ: ဒီလိုအားလပ်ရက်ရှညများမှာ ရောင်းဝယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သလား?